धेरै फिल्ममा ‘आमा’को रोलमा देखिन्छिन प्रियंका किन ? | Ekhabar Nepal
मनोरञ्जन चैत्र ४ २०७४ ekhabarnepal
प्रियंका कार्की मिति गुज्रिसकेकी हिरोइन होइनन् । अहिले ३१ वर्षमा हिँडिरहेकी उनीसँगै अझै केही वर्ष हिरोइन बनेर खाने उमेर, सौन्दर्य र फिगर छ । तर हालै ‘नाई नभन्नु ल ५’ मा अर्की नायिका स्वस्तिमा खड्काकी आमाको भूमिका गर्न प्रियंका तयार भएको खबर आयो । यसअघि ‘छक्का पञ्जा-२’ मा पनि उनी स्वस्तिमाकै आमाको रुपमा देखिएकी थिइन् ।
त्यसो त उनले आफ्नो चौंथो प्रोजेक्ट ‘नाई नभन्नु ल २’ मा नै बाल-कलाकार अनुभव रेग्मीको आमाको भूमिका गरेकी थिइन् । उनलाई त्यो भूमिकामा काम नगर्न धेरैले भनेका थिए । तर, प्रियंकाले सुनिनन् ।नायिकाहरु एउटा उचाईमा पुगेको समयमा, भूमिकामा विशेष ध्यान दिन्छन् । खल-नायिका, आमा, दिदीको भूमिकामा देखिन उनीहरु चाहँदैनन् । ‘नाई नभन्नु ल ५’ मा नै नायिका वर्षा सिवाकोटीले स्वस्तिमाको फुपू बन्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
तर, प्रियंका एकपछि अर्को चलचित्रमा ठूलो चश्मा, सेतो कपाल, सारी लगाएर अर्की नायिकाको आमाको भूमिकामा काम गरिरहेकी छिन् । यसरी, काम गर्दा उनको नायिका करिअर संकटमा पर्दैन होला ? कि उनले यति छिट्टै आफूलाई ‘चरित्र अभिनेत्री’ मा सिफ्ट गर्न खोजेकी हुन् ?
नायिकाले भनिन्-‘मलाई लाग्दैन कि, एउटा नायिकाले सधै डाँडापाखामा नायकसँग रोमान्स मात्र गर्नुपर्छ ।’ वास्तविक जीवनमा हेर्ने हो भने प्रियंका निकै ग्ल्यामरस छिन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनको ड्रेसअप बोल्ड हुने गर्छ । तर चलचित्रका पर्दामा चाहिँ आफू सुहाउँदो रोल नपाएकै हुन् ?
उनी भन्छिन्-‘मलाई रियल लाइफमा जे छु, पर्दामा पनि त्यस्तै देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । फरक-फरक भूमिकामा काम गर्दा छुट्टै रमाइलो लाग्छ । मैले पर्दामा आमाको भूमिकामा काम गर्दैमा बाटोमा पनि मलाई कसैले अन्टी, आमा भनेर बोलाउने होइन । कलाकार भैसकेपछि हरेक भूमिकामा रमाउन जान्नुपर्छ ।’
‘प्रियंकालाई चलचित्र क्षेत्रमा टिक्नकै लागि र राम्रा ब्यानर नगुमाउनका लागि जस्तो भूमिकामा पनि काम गरिरहेको आरोप छ । प्रियंका आरोपको खण्डन गर्दै भन्छिन्-‘मलाई अहिले देशका सबैभन्दा चलेका, पहिलो लिस्टका ब्यानरले खोजिरहनु भएको छ । म त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु । कुनै चलचित्रमा १०० मिनेटको भूमिका छ भने ९० मिनेट म नदेखिएपनि केहि छैन । तर, १० मिनेट देखिँदा पनि मेरो भूमिकाले समाज र दर्शकलाई प्रभाव पार्नुपर्छ ।’
नेपाली चलचित्र क्षेत्र अहिले नै एडभान्स भैनसकेको उनको वुझाई छ । नायिका कार्की अगाडि थप्छिन्-‘मेरो जेनेरेशनपछि आउने नायिकाका लागि काम गर्न सहज होला । २ वटा चलचित्रमा काम गरेर १ करोड कमाउने अवस्था पनि आउला । तर, अहिले मेरो समयमा त्यो संभव छैन । यसैले यो क्षेत्रमा अगाढि बढ्न, आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि पनि मैले धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।’
प्रियंकाका अनुसार उनलाई अफर गरेका ए लिस्टका ब्यानरका अगाडि उनी चुजी हुन चाहन्नन् । उनी, ती ब्यानरसँग कुनै घमण्ड देखाउन नै चाहन्नन् । यसैले, अफर आएका हरेक किसिमका भूमिकामा आफूले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।